Fanampiana Hanaiky ny Fitsipik’i Dada sy Neny | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kyangonde Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mooré Myama Norvezianina Nzema Ossète Ourdou Poloney Portogey (Brezila) Quiché Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Rosianina Tiorka Tojolabal Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Angamba ianao mahalala ankizy mahazo mody amin’izay ora tiany, manao izay akanjo tiany, miaraka foana amin’izay namana tiany, ary mandeha any amin’izay tiany haleha. Sahirana loatra angamba ny ray aman-dreniny, ka tsy mahafantatra izay ataon-janany.
Resahin’ny Baiboly anefa fa tsy hahomby ny fitaizana toy izany. (Ohabolana 29:15) Maro ny olona lasa tia tena, noho izy ireo tsy nisy mpifehy tamin’ny mbola kely. Izany no anisan’ny tena mahatonga ny olona eto amin’ity tontolo ity tsy hanam-pitiavana.​—2 Timoty 3:1-5.
Aza mitsiriritra an’ireo ankizy avela hanao izay tiany àry. Tadidio kosa fa tia anao ny ray aman-dreninao matoa mifehy anao. Rehefa manome anao fitsipika araka ny antonony izy ireo, dia manahaka an’i Jehovah Andriamanitra. Hoy mantsy izy tamin’ny vahoakany:
“Hataoko izay hahatonga anao ho malina, ary hatoroko anao ny lalana tokony halehanao. Hanoro hevitra anao aho ary hitsinjo anao ny masoko.”​—Salamo 32:8.